Takiana ny mangarahara amin’ny ady amin’ny pesta : mitobaka ny volabe fanampiana avy any ivelany | NewsMada
Takiana ny mangarahara amin’ny ady amin’ny pesta : mitobaka ny volabe fanampiana avy any ivelany
Sesilany ny fanampin’ireo vondrona iraisam-pirenena sy ny malala tanana hiadiana amin’ny pesta. Mitobaka ny volabe sy ny fitaovana. Takiana kosa anefa ny mangaraharaha amin’ny lafiny rehetra sy ireo sehatra mifandray amin’izany.
Amin’ny anaran’ny mangarahara. Vao omaly, nanome volabe mitentina 1,7 miliara Ar ny Vondrona eoropeanina (UE) hiadiana amin’ny aretina pesta. Natao hanampiana ny fiarovana mba tsy hiparitahan’ny pesta ny 1,05 miliara Ar amin’izany. Hanampiana amin’ny fandevenana ireo maty ihany koa ary indrindra hanatevenana ny fanentanana eny anivon’ny kaominina. Natao hamatsiana ireo hopitaly mandray pesta koa ny 665 tapitrisa Ar.
Teo koa ny fanomezana fitaovana milanja 34 taonina avy amin’ny mpanjaka marokanina hanatevenana ny ady atao amin’ny valanaretina pesta.
Ankoatra ireo, efa tonga nitondra ny anjara birikiny amin’ny ady amin’ny pesta ireo delegasiona avy amin’ny Mercyships. Nanolotra fanafody miisa 2.500 sy sarom-bava 1.100 izy ireo tamin’izany.
Manampy izany ny tohana avy amin’ny OMS tamin’ny alalan’ny fitaovana entin’ny dokotera miasa sy mitsabo ny olona mararin’ny pesta ary manao fitliana ny aretina. Ho voatsinjara araka ny tokony ho izy avokoa ve ireo fitaovana sy kojakoja samihafa ireo ? Ho tonga hatreny ifotony… Tsy hivily lalana na koa ho hita eny an-tsisin-dalana, hivadika fitadiavam-bola ‘bizna”? Tahaka izany koa ny fitantanana io volabe avy amin’ny UE io. Tena handeha amin’ny tokony ho izy sy hisy fanaraha-maso atao amin’ireo tompon’andraikitra hiandrakitra ny fitantanana izany ?
Antontanisa momba ny maty…
Tsiahivina fa efa miaina anaty fitaintainana amin’ity aretina ity ny maro. Ferana ny fanaovana fitiliana raha mba te hahafantatra ny toe-pahasalamany ny olona. Mihafy hatramin’ny dokotera satria tsy maharaka ny fitaovana na ny sarom-bava ampiasaina fotsiny aza ka maro ireo dokotera mararin’ny pesta.
Ankoatra izany, ifampitadiavana ny fanafody famonoana bibikely. Tsy misy milaza mazava ny toerana hakana izany fa samy maminany ary lasa risoriso mihitsy aza.
Natao ho amin’ireny rehetra ireny anefa ny fanampiana avy amin’ireo firenena vahiny ireo.
Etsy andaniny, tsy mazava intsony ny antontan’isa avoakan’ny minisiteran’ny fahasalamana sy ny BNGRC. Antontan’isa farany milaza fa efa mahatratra 124 ireo olona maty. Tao koa anefa ireo noterena fotsiny nasiana porofo fa matin’ny pesta ny havany, kanefa fantatra izao fa efa nolazoin’ny aretina efa ela.
Manjaka ny tsaho sy honohono
Ny sasany matin’ny fiakaran’ny tosidra ka noterena ho matin’ny pesta tsotra izao hampiakarana ny antontan’isa. Tokony hanokafana fanadihadiana avokoa ny momba izany. tsy mahagaga koa anefa raha tonga amin’izao ity raharaha ity noho ny tsy fahaizana sy tsy fahampian’ny serasera sy ny fampitam-baovaon’ny fitondrana sy ny tompon’andraikitra. Mampahazo vahana ny tsaho sy ny honohono miteraka fitsaram-bahoaka na koa mampisavoritaka ny fiarahamonina.
Alaim-panahy mihitsy ny mpanara-baovao sasany hilaza fa entina hitadiavana famatsiam-bola ity aretina pesta niniana natao ho resabe ity. Hitsinjovana ny fifidianana amin’ny taona ho avy ireo volabe mirarak’ompana ireo ?
Une réponse à "Takiana ny mangarahara amin’ny ady amin’ny pesta : mitobaka ny volabe fanampiana avy any ivelany"
ravonison hugues 30/10/2017 à 13:35
aza manatena mangarahara zany raha mbola aty amin’ny tany andala-pandrosoana